အတက်ရောဂါ . . ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ . . ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ . . . အပိုင်း (၃ - နိဂုံးပိုင်း ) | Mizzima Myanmar News and Insight
အတက်ရောဂါ . . ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ . . ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ . . . အပိုင်း (၃ - နိဂုံးပိုင်း )
မင်္ဂလာပါ မဇ္စျိမပရိသတ်များခင်ဗျား။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 4R Health Talk အစီအစဉ်ကနေ ကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျား။ ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးသွားမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ အတက်ရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘယ်လိုကာကွယ်သင့်သလဲ၊ ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ - အပိုင်း ( ၃ - နိဂုံးပိုင်း )ကို ဦးနှောက်နဲ့အာရုံကြောအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ဆရာကြီးဦးဉာဏ်ထွန်း ၊ WHO ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Dr . Stephan Paul Jost နဲ့4R Consultancy . Ravindra Jain တို့နဲ့အတူ ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။တက်တဲ့အခါမှာအရေးပေါ်ကုသနည်းလေးပြောပြစေလိုပါတယ်၊တစ်ချို့တွေကြတော့ တက်တယ်ဆိုရင် ခြေမဆွဲချိုးတာတို့၊ ပြီးလို့ရှိရင် ပါးစပ်ထဲကိုဇွန်းထည့်တာတို့ ကြားဖူးတာ ပေါ့နော်၊ဒါတွေကလည်းအယူအဆလွဲမှားတာတွေတော့ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဆရာအဲ့ဒါ နည်းနည်းလေးဖြည့်ပြောပေးပါခင်ဗျား။
ဖြေ။ ။ အဲ့ဒါကအင်မတန်မှ အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာလို့ဆိုတက်နေတဲ့လူနာတစ်ယောက်ကို အခုဒီမှာရှိတဲ့ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် လမ်းသွားရင်းနဲ့ တွေ့နိုင်တယ်၊တွေ့နိုင်တဲ့အခါကျတော့ ကိုယ်ကဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘဲနဲ့ ကျွန်တော်တို့မြန်မာရဲ့ ထုံးစံဝိုင်းအုံကြည့်နေလိုက်ရင် ဘာမှ အလုပ်မဖြစ်တော့ဘူး။ ဝိုင်းအုံကြည့်စရာမလိုဘူး၊သူ့ကိုတက်နေတာဆိုလို့ရှိရင် သူဘေးမှာ အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာဆိုလို့ဆိုရင် ဘေးကိုဖယ်ပေးရမယ်၊နောက်ခြေမချိုးတာတို့ ဘာတို့ ဒါတွေကိုဆွဲဆန့်တယ်ဆိုတာကမလုပ်သင့်တဲ့ဟာ၊ အကယ်၍ အဲ့ဒါ လုပ်တတ်လို့ တချို့တွေ အဆစ်ပြူတ်တတ်တယ်၊နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာ ပါးစပ်ထဲကိုသူတို့က လျှာကိုက်မိမှာကြောက်လို့ တစ်ခုခုထည့်ကြတယ်၊အဲ့ဒီအချိန်မှာလက်ထည့်ကြည့် လက်ပါပြတ်နိုင်တယ်၊ သူတို့အတင်းကိုက်တာကိုး၊ ဆိုတော့ဇွန်းထည့်တယ်၊ ဇွန်းထည့်အခါ သွားကျိုးပြီးတော့ သွားကအသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိတ်နိုင်တယ်။ အမှန်က တက်နေတဲ့အချိန်မှာ၊ ပါးစပ်ထဲကိုဘာမှ ထည့်စရာမလိုဘူး၊ ဒီအယူအဆကိုက တော်တော်လေးကို ပြင်ယူနေရတယ်၊ အခုအချိန်ထိကို။ ကျွန်တော်တို့ စီမံချက်စခဲ့တုန်းက နေပြည်တော်မှာ ဆရာမတစ်ယောက်ကို မေးတယ်၊ ဆရာမတစ်ယောက် ဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင် ထည့်မှာပဲ၊ တက်တဲ့ လူတိုင်း တော့ အမြုပ်မထွက်ဘူး၊ တစ်ချို့တွေကအမြုပ်ထွက်တယ်၊ လျှာကိုကိုက်မိတဲ့အတွက်ကြောင့် သွေးလည်းပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် သူတို့ကဒါကို ခွေးရူးပြန်ရောဂါနဲ့ လွဲမှားပြီးတော့ အမြုပ်ထိရင် ကူးစက်တတ်တယ် ထင်တယ်၊ ထင်ကြတော့ အနားမကပ်ကြနဲ့ ဘာမှ မလုပ်ကြနဲ့ ဆိုတော့၊ ကျွန်တော် အဲ့ဒီမှာမေးကြည့်တဲ့ အခါကျတော့ ဟာဟုတ်တယ် ဒါကူးစက်တတ်တယ်တဲ့ အဲ့ဒီလောက်ထိကို မှားနေတာ၊အမှန်ကတော့ ဒါကူးစက်တတ်တဲ့ရောဂါမဟုတ်ဘူး၊ စိတ်ရောဂါလည်းမဟုတ်ဘူး အမှောက်ပယောဂကြောင့်လည်း မဟုတ်ဘူး ဆိ်ုတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒါကိုဖိနှိပ်တာလည်းမရဘူး၊ တစ်ချို့ဆို ကြက်သွန်ဖြူ ရှူခိုင်းတာတို့၊ ဖိနပ်ရှူခိုင်းတာတို့ ဒါတွေကမှားတဲ့ အယူအဆ၊ ကျွန်တော့်တို့ ဗီဒီယိုထဲမှာအများကြီး ဖော်ပြထားတာရှိတယ် အတိုပဲဖြစ်ဖြစ် အရှည်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊လေ့လာလိုက်လို့ရှိရင် ဘယ်ဟာလေးတွေက ကောင်းတယ်ဆိုတာလူတွေကြားမှာ ပညာရအောင် ပြပေးလို့ရပါတယ်၊ ဒါကလည်းကူညီခြင်း တစ်မျိုးပေါ့။
မေး။ ။ တကယ့်တကယ် အဲ့ဒီလိုမျိုးရောဂါရှိတတ်တဲ့ ကာယကံရှင်အနေနဲ့ရော ရေကူးမယ်ဆိုရင် တစ်ခြားတစ်ယောက်နဲ့ အတူတူကူးတာတို့။ ကားမောင်းမယ်ဆိုရင် တစ်ခြားတစ်ယောက်နဲ့ အတူတူမောင်းတာတို့ ပေါ့နော်၊ တစ်ခြားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဘာတွေဆောင်ဖို့ ရှောင်ဖို့ လိုဦးမလဲ ခင်ဗျား ။
ဖြေ။ ။ ဥပမာရေကူးတယ်ဆိုရင်တော့ အဖော်ပါမှ ဖြစ်မယ်။ ကားမောင်းတာတော့ အမှန်ကတော့ မမောင်းတာတော့ အကောင်းဆုံးပဲ။ ရှောင်ရမယ်ဆိုတာက ဥပမာတချို့တွေက တစ်ခြားတိုင်းပြည်မှာ ကျတော့ ရေးချိုးရင် ရေဇလုံ(ရေချိုးကန်)နဲ့ချိုးတယ်၊ အဲ့ဒီအခါကျရင် မြုပ်သွားပြီးလို့လိုရှိရင် တက်တဲ့အချိန်ကျရင် ရေနစ်ပြီးတော့သေနိုင်တယ်။ နောက်တစ်ခုက ပိုသေချာတာက အဲ့ဒီလိုမျိုးကျရင် ရေချိုးခန်းကိုဂျက်သော့ မခက်တာတို့၊ ဂျက်မချတာတို့အကောင်းဆုံးပေါ့။ နောက် မိန်းကလေးတွေက မီးဖိုထဲဟင်းချက်တတ်တယ်၊ အဲ့ဒီဟာကလည်းအရေးကြီးတာပဲ၊ သူချက်တဲ့ အချိန်မှာ မီးလောင်တာတို့ မီးလောင်ဒဏ်ရာနဲ့ အများကြီးရကြတယ်။ အဲ့ဒါတွေက နည်းနည်းသတိထားဖို့တော့ လိုမယ်လို့ထင်တယ်။ နောက် တစ်ချို့တွေကျတော့ ကိုယ် တက်တာကို နည်းနည်းလေး ကြိုသိတဲ့ လက္ခဏာရှိတတ်တဲ့ အတက်ရောဂါမျိုးရှိတယ်။ အဲ့ဒါမျိုးကျရင်တော့ ဟာ ကျွန်တော်တက်ချင်ပြီ၊ အမေ၊ ကျမတို့ ဒီမှာနာတယ် တက်ချင်သလို ဖြစ်နေတယ် ဆိုရင် သူအနီးအနားမှာ ထိုင်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့။ ပြီးတော့ လူတွေက ဝိုင်းအုံမကြည့်ဖို့လည်း ဥပမာ အကျီ င်္ကျပ်တယ် နိုင်ငံခြားမှာဆို နက်တိုင်(လည်စည်း) လျှော့ဖို့လိုတယ်လေ၊ နောက်ပြီးတော့ ပါးစပ်ကထွက်လာတဲ့ အမြုပ်တွေက မဆို့အောင် ထမင်းစားထားပြီးသားဆို အန်ဖတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ဘေးစောင်းလေးအနေအထားလေးကိုတော့ ထားပေးဖို့လိုတာပေါ့။ ဥပမာ ရေအနီးအနားမှာဆို အခုဆို မိုးတွင်းရာသီ ကလေးတွေ ကျောင်းသွား တယ် မြောင်းတွေမှာရေပြည့်နေတာမသိဘူး၊ ချော်လဲပြီးမြောင်းထဲကျသွားရင် ပြီးပြီ။ ကလေးက တက်တဲ့ရောဂါကြောင့်မသေဘဲနဲ့ ရေနစ်တာကြောင့်သေတဲ့လူနာရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ ပန်းတနော်သွားတုန်းကလည်း အဲဒီလိုအဖြစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာ ဒါကြောင့်ဒီလိုရောဂါမျိုးတွေကြောင့် အရွယ်မတိုင်ခင် အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့် အချိန်မီကုသဖို့ လိုတယ်၊ အချိန်မီဆရာဝန်နဲ့ ပြသဖို့လိုတယ်၊ ဒါတွေကျတော့ ကျန်းမာရေးပညာအသိမြှင့်တင်ဖို့လိုတယ်၊ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ W.H.O နဲ့ ပေါင်းလုပ်တယ်ဆိုတာကျောင်းတွေမှာ ပညာပေးရမယ်၊ များများသိအောင် ဆရာတို့လို မီဒီယာကနေများများ ဖြန့်ဝေရမယ်၊ လူများများသိမှ လူများများက ဒီရောဂါကိုအသိစိတ်ဓာတ်ဝင်ပြီး တော့ ကုသမှုခံယူမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီး။ ကုသဖို့ကျတော့ ရွာတွေမှာ နယ်တွေမှာဆိုရင် ဆေးရုံဆေးခန်းသွားဖို့ အဝေးကြီးဆိုတော့ ဝေးတဲ့အခါကျတော့ သူတို့မှာ တက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်သလဲ၊ ဆေးရုံဆေးခန်းဘယ်လို သယ်သွားသင့်သလဲ။ နောက်တစ်ခုကျတော့ လူတွေကဂရုမစိုက်တာပေါ့ နော်၊ ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတာ သူက တစ်လလောက်နေမှ တစ်ခါတက်တယ်၊ တက်တာကလည်း အချိန်မကြာဘူး၊ သုံးမိနစ်လောက်ပဲဆို ပြန်ကောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ သူကအလေးမထားဘူးပေါ့နော် လူနာကိုယ်တိုင်ကလည်းအလေးမထားဘဲနဲ့ ဒီတိုင်းမကုဘဲနဲ့ ထားတာတွေရှိတတ်ပါတယ်၊ ဆိုတော့ ဒီအပေါ်မှာရောဆရာကြီး ဘာပြောလို့ရနိုင်မလဲ။
ဖြေ ။ ။ အကယ်၍အဲဒီလိုလူနာမျိုးကျတော့ ကိုယ်ကရှင်းပြရမယ်၊ ဆရာဝန်နဲ့ ပြဖို့လိုတယ်၊ ဆေးသောက်ဖို့လိုတယ်၊ ဆိုတာကိုတော့ ပြောရလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ ငါးမိနစ်ထက် ပိုကြာပြီး တက်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒါအရေးကြီးပြီ၊ အရေးပေါ်ကုသဖို့ လိုပြီ ခုနကပြောတဲ့ တက်နေတဲ့ အချိန်မှာတော့ ရှေးဦးသူနာ ပြုစုနည်းကတော့ အကုန်လုံးရတယ်။ သုံးမိနစ်လောက်တက်တာကတော့ ဘာဆေးထိုးထိုး၊ ထိုးစရာလည်း မလိုသေးဘူးသူကသုံးမိနစ်လောက်နေရင် သူ့အလိုလိုကျသွားမှာပဲ ငါးမိနစ်ထိမကျဘူး ဆက်တက်နေတယ် ဆိုရင်တော့ ဒါအရေးပေါ်ကုသမှုလိုတဲ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အခြေခံ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းအဆင့်ထိကို အခုလောလောဆယ် တက်တဲ့လူနာကုဖို့ အတွက်က Diazephan ဆေးကိုဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာ သင်တန်းပေးထားတယ် ဘယ်အချိန်မှာဘယ် ဆေးပမာဏကို ဘယ် dose နဲ့ပေါ့၊ ဥပမာအကြောဆေးထိုးရင် အန္တရာယ်များတဲ့ အတွက်ကြောင့် အသားဆေးကထိရောက်မှု မရှိတော့ ကန်တော့ပါရဲ့ စအိုဝကနေ သွင်းပြီးထားမယ်ဆိုရင် အကြောဆေးထိုးသကဲ့သို့ အာနိသင် ရှိပါတယ် ဆိုတဲ့ဟာကို ကျွန်တော်တို့ ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ညှိပြီးတော့ ပေးဖို့ကို ကျွန်တော်တို့ ခွင့်ပြုထားတယ်။ Diazephan ဆေးက ထိန်းချုပ်ဆေးဝါးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် နည်းနည်းတော့ ခက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေကလည်း အသက်ကယ်ဆေးဖြစ်တယ်၊ ဥပမာ ကျွန်တော်တို့က သူတို့ကို ဒီဆေးလေးကိုထိုးခိုင်းမယ် မသက်သာရင်တော့ သူတို့သက်ဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်ဆေးရုံကြီးမှာ လွဲရတော့မယ်၊ အကယ်၍ တစ်ချို့တွေ တောမှာနေတာမှန်တယ်၊ မသွားနဲ့ အခက်အခဲကြောင့်ဆိုရင်တော့ နှစ်ကြိမ်ထိတော့ ကျွန်တော်တို့ကနားလည်မှုပေါ့လေ၊ နားလည်မှုဆိုပေမယ့် ပေးလို့လည်းရတဲ့ အဆင့်ထိတော့ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ပေးခိုင်းထားတယ်၊ diazephan က 20 mg အထိပေါ့ အများဆုံးပေါ့၊ အဲ့ဒါမှ မရရင်တော့ မြို့နယ်ဆေးရုံမှာတော့ မြို့နယ်ဆရာဝန်တွေ တာဝန်ယူပြီး ကုဖို့အတွက်ကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အခြေခံကျန်းမာရေးလက်စွဲစာအုပ်တွေမှာ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးကျရင် ဘယ်ဆေးကိုဘယ်လိုသုံးမယ်ဆိုတာအားလုံးသတ်မှတ်ထားပြီးသား၊ညွန်ကြားထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
တက်တဲ့လူဟာသူကိုယ်သူလည်း ချို့ယွင်းချက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့၊ အမဲစက် ပေါ့ ၊ stigma ပေါ့ ၊ သူ့ကို ဘာသာပြန်ရမှာ ကျွန်တော်လည်းရှာကြည့်ထားတယ်၊ ဥပမာ အမဲစက်တစ်ခုလိုဖြစ်တယ် လူတွေကအတက်ရောဂါရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ကူးစက်တတ်တယ်၊ ငါတို့နားမလာနဲ့ သူတို့က နည်းနည်းလေးရှောင်ဖယ်သလိုလုပ်တယ် ခွဲခြားသလိုလုပ်တယ် လူကြားထဲဝင်ဖို့ အခက်အခဲရှိလာတဲ့ အတွက်ကြောင့် သူ့မှာအားငယ်သလိုဖြစ်လာတယ်၊ နောက် စိုးရိမ်စိတ်တွေပေါ်လာပြီးတော့ စိတ်ထိခိုက်မှုတွေက ကြာရင်တော့ ဖြစ်လာတော့တယ် ရေရှည်ဖြစ်လာတာပေါ့၊ အဲ့ဒီလိုလူမျိုးကျတော့ ဒီလိုမလုပ်သင့်ဘူး။ ဒါကြောင့် stigma မဖြစ်အောင် stigma ကနေနောက်ဆက်တွဲ discrimination ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတယ်။ ဘယ်လိုမှကိုလူကြားထဲသွားလို့မရဘူး။ ဒီအလှူအတန်းကအစ ဘယ်ပွဲလမ်းမဆို သွားလို့မရ ၊ သူ့မှာ အိမ်မှာပဲနေရတယ်ဆိုတာတော့ အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူး။ မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် သူ့ကိုဒီလိုမဖြစ်အောင်တော့ ကိုယ့်မိသားစုရော သူ့နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်း အသိပညာရှိအောင် ပြောဖို့လိုတယ် ဒါတွေကဆွဲခေါ်ရမယ်၊ သူရဲ့ Quality of life သူ့ရဲ့ လူနေမှုဘဝကိုလူတန်းစေ့နဲ့ တန်းတူဖြစ်အောင်တော့ ကိုယ်ကဆွဲခေါ်ရမယ်၊ သူကတစ်ခြားရောဂါမှ မရှိဘဲ၊ စိတ်ရောဂါလည်းမဟုတ်ဘူး၊ ဘာမှ မွေးရာပါ ချို့ယွင်းချက်လည်းမရှိဘူး လူတိုင်းလိုနေနိုင်တယ်၊ လူတိုင်းလိုသွားလာနိုင်တယ် တွဲခေါ်သွားပြီးတော့ ဆေးမှန်မှန်ကုမယ်ဆိုရင် လူတိုင်းနဲ့ကို ဒီလူဟာအတက်ရောဂါ ရှိတယ်လို့တောင် မထင်ရဘူး။ ဥပမာကျောင်းထားလို့ရတယ်၊ အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်၊ ထိမ်းမြှားလက်ထပ်လို့လည်းရတယ်၊ ကလေးယူလို့ရတယ်၊ နို့တိုက်လို့ရတယ်၊ ပြဿနာတွေကအဲ့ဒါတွေပဲ။ ဥပမာဆိုကြပါစို့ ကျွန်တော်မေးကြည့်ချင်တယ် ကိုယ့်မှာကလေးရှိလာရင် ဒီကလေးကို အတက်ရောဂါရှိတဲ့ကလေးနဲ့ အတူတူပေးကစားမလား မပေးကစားဘူးလား နည်းနည်းလေး စမ်းကြည့်ပေါ့ စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲ ၊ တစ်ချို့တွေကျတော့ ပေးမကစားရဲဘူး၊ အမှန်ကတော့ ကျွန်တော်တို့လည်းပြောတာပဲ ကိုယ့်သားသမီးကို အတက်ရောဂါရှိတဲ့လူနဲ့ ပေးလက်ထပ်မလား ဆိုတာတော့ အလွယ်တကူပြောရင် ဒါဆေးပညာအရလက်ထပ်လို့ရတယ်။ ဒါကိုယ့်သားသမီးတကယ်ဖြစ်လာရင်တော့ စဉ်းစားလာပြီ။ အလုပ်အကိုင်မှာလည်း ဒီလိုပဲ အလုပ်အကိုင်မှာကျတော့ ဒီတက်တဲ့လူနာ ဒီအလုပ်အကိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ သူနဲ့သင့်တော်ရာကို ရွေးလို့ရတယ်။ အိပ်ရေးမပျက်တဲ့ ညစောင့် အလုပ်ကိုမပေးနဲ့ပေါ့။ ကားမောင်းရတဲ့အလုပ်ကိုမပေးနဲ့ပေါ့။ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအလုပ်ကိုမပေးနဲ့ပေါ့။ သူတို့ကိုမခွဲခြားထားပါနဲ့ ကျောင်းလည်းပေးဆက်တက်လို့ရတယ်။ ပညာလည်းသင်လို့ရတယ်။ အလုပ်လည်းလုပ်လို့ရတယ်။ အိမ်ထောင်သားမွေး အကုန်လွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်လို့ရတယ်၊ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က Quality Of Life လူတန်းစေ့နဲ့ နေနိုင်တဲ့ အဆင့်မျိုး တိုးတက်မြင့်မားပြီးတော့ လူတန်းစေ့နဲ့ နေနိုင်တဲ့ အဆင့်မျိုးဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့က လိုချင်တာ.။
မေး။ ။ အတက်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထပ်ဖြည့်ပြောချင်တာရှိရင် ပြောပေးပါခင်ဗျား။
ဖြေ။ ။ အဓိကကတော့ ဒီဆေးကုသမှုရအောင် ဒီအတက်ရောဂါနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသိပညာ ပိုတိုးတက်ဖို့ အတွက် လိုတယ်။ ကာကွယ်ရေးအပိုင်းမှာလိုအပ်တဲ့ ကာကွယ်ရေးပိုင်းလိုတယ်။ နောက် လူတွေ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမလုပ်ကြဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေ ၊ ဆေးကုသမှု မှန်မှန်ရဖို့ အတွက်က ကျွန်တော်တို့ သက်ဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့် ကနေပြီးတော့ နီးစပ်ရာကနေပြီးတော့ စည်းရုံးပြီးတော့ ကာကွယ်ကုသလို့ရတယ် ဆိုတာကို ရှင်းပြဖို့လိုတယ်။ ဥပမာ ကုသတဲ့ ဆရာဝန်အနေနဲ့ရော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ရော လူနာအနေနဲ့ရော စိတ်ရှည်ဖို့တော့လိုတယ် အချိန်တစ်ခုပေးရမယ် ဆိုတော့ လူတိုင်းကတော့ အားလုံးကတော့ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းမဟုတ်တောင်မှ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း သက်သာပျေက်ကင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ အားမလျှော့ပါနဲ့။ ဒါတွေဟာကောင်းတဲ့ အလားအလာ အများကြီးရှိပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ စီမံချက်လုပ်ထားတယ် အများကြီး။ ဆေးကိုလည်းအလွယ်တကူရနိုင်မယ်၊ ကုသမှုကိုလည်းအလွယ်တကူရဖို့အတွက်ကို သိဖို့ပဲလိုပါတယ်။ ဆိုတော့ ဝိုင်းဝန်းကူညီဖို့ မီဒီယာတွေကစပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးပညာပေး လုပ်ငန်းတွေမှာ ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါလို့ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ မေတ္တာရပ်ခံရင်း နိဂုံးချုပ်ပါတယ်။ ။
အတက်ရောဂါ . . ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ . . ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ . . . အပိုင်း (၁) အပြည့်အစုံ -http://www.mizzimaburmese.com/article/52882
အတက်ရောဂါ . . ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ . . ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ . . . အပိုင်း ( ၂) အပြည့်အစုံ -http://www.mizzimaburmese.com/article/52909